Yini ongayibona edolobheni lase-Eguisheim eFrance | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona ku-Eguisheim, e-Alsace
I-Eguisheim yidolobha kanye nomasipala otholakala eFrance esifundeni esaziwa kakhulu i-Alsace. Yindawo eyaziwa futhi ngokuba nomkhiqizo omuhle wewayini, kodwa futhi ivelela ngokuba ngelinye lalawo madolobha aphakathi kwamahle kakhulu eFrance ngoba isitayela sayo sendabuko sigcinwe kahle kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, ukuvakasha okulungele ukuphunyuka ngempelasonto.
I-Eguisheim ingelinye lalawo madolobhana ase-Alsace enobuhle obukhulu, ngoba izindlu zayo zisenokwakheka okujwayelekile kwesigamu. Agqame ikakhulukazi ngesikhathi sikaKhisimusi, kepha kuningi ongakubona kule ngxenye yeFrance eseduze nomngcele neJalimane.
2 Umbuthano wegolide
3 I-Place du Chateau Saint Leon
5 ISonto LaseSan Pedro neSan Pablo
6 I-Eguisheim ngoKhisimusi
I-Eguisheim isivele iqale umlando wayo ngokuba yindawo yokuhlala yamaRoma. Ngisho namaRoma aqala ukulima izivini kule ndawo enhle kakhulu. Kepha okwakhe ukukhula kwakungeke kuze kuze kube sekhulwini lesishiyagalombili lapho uCount Eberhardt enenqaba eyakhiwe endaweni. Emaceleni kwalesi sigodlo, kwakhiwa imigwaqo ezungeze ukuma kwendandatho, enikeza leli dolobha ukwakheka kwasekuqaleni. Yisigodlo esifanayo esingavakashelwa namuhla, lapho uBruno wase-Eguisheim-Dagsbourg azalelwa khona, owayezoba nguPapa Leo IX.
Eguisheim okungcono kakhulu esingakwenza ngokungangabazeki sizilahlekele kuleyo migwaqo emihle nemidala sicabanga ukuthi abantu bakuleli dolobha baphila kanjani amakhulu eminyaka. Sizozizwa ngendaba eyiqiniso, ngoba ezinhlangothini zombili zemigwaqo kunobuhle izindlu ezijwayelekile ezinamapulangwe anemibala emihle. Umbuthano wegolide ubhekisa endaweni engaphandle impela yedolobha, lapho kutholakala khona imigwaqo emihle kakhulu. Ukuthatha uhambo lokungcebeleka, sithathe izithombe futhi sijabulele imininingwane emincane yezindlu ezivame ukuhlotshiswa ngezimbali, kuzoba yinto esizothola ukuthi iyathandeka. URue du Rempart ungomunye waleyo migwaqo futhi kuyasijabulisa ngetshe elihle lakudala elibukeka njengokuthile okuphuma endabeni. Emakhoneni amanye amawindi neminyango ungabona imibhalo eqoshiwe yemindeni yakudala noma yezentengiselwano ezazenziwa kwezinye zalezo zindlu. Kulo mgwaqo kukhona nePigeonnier, indawo enikezela ukwahlukaniswa kwemigwaqo emibili futhi engenye yezindawo ezithwetshulwe kakhulu e-Eguisheim.
I-Place du Chateau Saint Leon
Lapho sesihambele indawo ezungeze idolobha nemigwaqo yalo emincane nezindlu zalo ezinhle, kufanele sifike enkabeni. Le yi isikwele esikhulu kunazo zonke nesiphakathi nendawo e-Eguisheim, indawo esingenakuphuthelwa yiyo. Maphakathi nalesi sikwele singabona umthombo omuhle onomfanekiso kaSanta Leo IX futhi ngemuva nje kwalo mthombo singabona isigodlo esidala esakhiwe ngekhulu lesishiyagalombili. Eceleni kwenqaba kunesonto elincane elizinikele kuPapa Leo, elalakhiwe phezu kweminye imigodi emidala.
Ezinye izikwele kuleli dolobha elincane lase-Eguisheim lokho kufanele sivakashele yiPaul du Marche, ngemuva kwendlu yesonto. Kuyisikwele esincane esinokubaza phakathi nendawo kodwa ngoKhisimusi baphinde babeke imakethe enhle lapha. Indawo iMGR Stampf ingesinye sezikwele ezibukekayo kuleli dolobha, esinomthombo enkabeni yawo naphansi ngamatshe amatshe. Yizikwele ezincane kepha ziyathandeka ngayo yonke imininingwane, ngakho-ke akufanele siphuthelwe yilona kona lale ndawo, ngoba bonke bangasimangaza.
Izinsalela zale mibhoshongo zitholakala emaphethelweni edolobha. IWeckmund, iWahlenbourg neDagsbourg Yizakhiwo ezintathu zamatshe esanti ngamathoni abomvu okwakungezomndeni wakwa-Eguisheim. EMpini yama-Óbolos eyayibhekene nabantu abangomakhelwane, amalungu alo mndeni ashiswa esigxotsheni futhi le mibhoshongo yaba yingxenye yababhishobhi baseStrasbourg.
ISonto LaseSan Pedro neSan Pablo
Leli yibandla okubaluleke kakhulu kubantu base-Eguisheim. Ithempeli elidala, elivela ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX, elalakhiwe ngesitayela samaRoma kodwa okwamanje esinikeza isitayela seGothic. Yize ingaphandle layo lingathakazelisi, ngaphakathi singabona isithombe esibaziwe seVirgin of Ouvrante kusukela ngekhulu le-XNUMX.
Yize leli dolobha lihle unyaka wonke, iqiniso ukuthi ngesikhathi sikaKhisimusi lamukela izivakashi eziningi ezengeziwe. Leli dolobha kanye nabanye abanjengoColmar banamanye izimakethe ezinhle ezigcawini nasemigwaqweni yazo bagqoka ngazo zonke izinhlobo zokuhlobisa. Ngisho nezindlu zihlotshisiwe ukuze konke kube nomoya omangalisayo kaKhisimusi. Uma usithanda lesi sikhathi sonyaka, kufanele uvakashele la madolobha ngoKhisimusi ukuze uzwe lowo moya ngokugcwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Yini ongayibona ku-Eguisheim, e-Alsace
Amazwe aseMelika Ephakathi